Shenzhen TryAce Technology Co., Ltd waa mid ka mid ah soo saarayaasha keentay keenidda R & D, wax soo saarka iyo iibinta Cam dual dumisaan, Cam dumisaan 4K, wifi Cam dumisaan, Cam dumisaan yar, qarsoon Cam dumisaan, camera muraayad ....
Waxaan qotomiyey set oo ah nidaamka ilaalinta tayada, Waqtigan xaadirka ah, waxaan leenahay ka badan 10 QC shaqaalaha, iyo si adag u dhameystiraan waxyaabaha ISO9001.Our u sharrifnay Binii shahaadada CE, FCC, CCC, ROHS, iyo IP68. Waxaan leenahay 15 sano oo waayo aragnimo ah la dhoofiyo, adeegyada aan la siinin kordhaya OEM iyo ODM amar in America, Europe, North America iyo koonfur bari Asia. Iyo kooxda ganacsiga our diyaar u yahay inuu aad u adeegaan.
"Made caadi ah si aan caadi ahayn" waa fikradda ah macalin aynu wadno iyo fuliyaan weerarka. Isla mar ahaantaana, waa gool qof kasta oo TryAce eryanayn. Waxaan aaminsan nahay: In deegaanka fadilay si ay u sameeyaan bulsho-habboonaanta iyo badbaadada a Shiinaha iyo iyaga oo taageero iyo dhiirigelin aan ka helno daraasiin macaamiisha daacad TryAce s iyo socod kasta oo nolosha, aan, sida dhaq-ka cusub, sida xaqiiqada ah qaadan doonaa faa iidayso caasimada, technology, tayada iyo maamulka waa inaan geesi ku sahaminta iyo innovating waxyaabaha cusub, samaynta darsaday dheeraad ah, waayo, berri wanaagsan oo dalka iyo nabadgelyada gaadiidka dunida ee.